I-Sky Island Resort - Izindlu zeholide ezakhiwe ngamaplanga zase-Meadow - I-Airbnb
I-Sky Island Resort - Izindlu zeholide ezakhiwe ngamaplanga zase-Meadow
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguSean
Izindlu zethu zeholide ezakhiwe ngamaplanga ziiyunithi zokuziphekela, nganye inekhitshi layo elinento yonke oyifunayo ekhitshini - kuquka isitovu, ifriji ne-microwave. Indlu nganye yeholide eyakhiwe ngamaplanga inebhedi enkulu kunye nesofa yokulala yale mihla ejike yaba yibhedi enye etofotofo. Izindlu zethu zeholide ezakhiwe ngamaplanga zonke zixhotyiswe ngeTV, ishawa engaphandle, izinto ze-braai, iveranda yabucala, ifeni yangaphezulu kunye nenkonzo yegumbi.
Yonke indawo yethu yokuhlala iquka isidlo sakusasa esicocekileyo!
NCEDA UQAPHELE: UDINGA i-4x4 ukuze UFIKE kuthi.
I-Sky ISLAND RESORT yi-Eco Resort enama-50% oziphetheyo. Le resort yenziwa kucingwa ngeendawo zasekuhlaleni ibe inezinto ezininzi eziluhlaza, ezifana nokusetyenziswa kwezinto zasekuhlaleni ezingonakalisi indalo, ukusetyenziswa kombane ophantsi, izizukulwana ze-biogas kunye neenkqubo zamanzi ezingayonakalisiyo indalo.
Sikhulisa imifuno yethu, sineenkukhu zethu ezinika ivenkile yethu yokutyela amaqanda amatsha ibe yonke inkunkuma yethu yeevenkile zokutyela iya kwiingulube zethu ezimbini ezikrwada.
Usenokuba nethamsanqa lokubona ezinye zezilwanyana zethu zasendle ezifana nabantwana bamahlathi, iduiker, iinkawu, ii-squirrels kwaye ngokuqinisekileyo uza kubona iidonki zethu ezigcina indalo kwaye zisebenza njengengca enkulu! Yhoo, kwaye sineentlobo ngeentaka zasendle zabalindi beentaka.
You may explore our entire mountain :)
SisePonta Malongane, eyidolophana encinci ethandekayo apho unokuthenga khona ubugcisa basekuhlaleni uze uve inkcubeko yabo kuqala. Kukho neebhari ezimbalwa, iivenkile kunye neevenkile zokutyela kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo kwaye ukuba yindawo engaphandle entle oyikhangelayo, uye kwindawo efanelekileyo. Sise ngentla kwechibi lasePonta Malongane, kukho indlela yeenyawo ekhokelela elunxwemeni apho unokonwabela i-snorkel kwiipuli zethu zamatye zasekuhlaleni. Ungabhukisha ne-scuba dive kunye ne-Ocean Safari kwaye, owaziyo, mhlawumbi uza kusikelelwa ukuba ufumane iidolfini zasendle uze ube nexesha elimnandi elingasoze lilibaleke!
Izindlu zethu zeholide ezakhiwe ngamaplanga ziiyunithi zokuziphekela, nganye inekhitshi layo elinento yonke oyifunayo ekhitshini - kuquka isitovu, ifriji ne-microwave. Indlu nganye yeholide eyakhiwe ngamaplanga inebhedi enkulu kunye nesofa yokulala yale mihla ejike yaba yibhedi enye etofotofo. Izindlu zethu zeholide ezakhiwe ngamaplanga zonke zixhotyiswe ngeTV, ishawa engaphandle, izinto ze-braai, iveranda yabucala,…
4.60 (iingxelo zokuhlola 59)
SisePonta Malongane, eyidolophana encinci ethandekayo apho unokuthenga khona ubugcisa basekuhlaleni uze uve inkcubeko yabo kuqala. Kukho neebhari ezimbalwa, iivenkile kunye neevenkile zokutyela kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo kwaye ukuba yindawo engaphandle entle oyikhangelayo, uye kwindawo efanelekileyo.